Ụbọchị My Pet » 6 Ihe Kpatara itinye Down gị Cell Phone
site Erica Loop
6 Ihe Kpatara itinye Down gị Cell Phone
emelitere ikpeazụ: Nov. 25 2020 | 2 min agụ
Ị na-anọdụ ala gafee si agbọghọ ma ọ bụ nwa okorobịa nke na nrọ gị n'oge a candlelit nri abalị na hippest ebe ọhụrụ n'obodo. Ihe niile na-inyefe tinyere na a royally ihunanya ụzọ ruo mgbe ekwentị gị na-amalite na-afụ na akụkụ ndị enyi gị, nwaanyị na ọbụna mama - niile na-arịọ otú ọ na-aga ma ọ bụ ma ọ bụrụ na nke a bụ "otu." I nwere nhọrọ abụọ: Mechiọnụ ringer, na-etinye ekwentị pụọ ma na-eleghara ya ruo mgbe gị na ụbọchị bụ ihe ma ọ bụ ị pụrụ ịza onye ọ bụla ozi na-abịa na. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-mgbe e mesịrị na ị na-agba ọsọ ahụ ihe ize ndụ nke bụghị nanị na-ebibi ụbọchị, kamakwa na o kwere omume nwere nke ga-eme n'ọdịnihu romance na nke a ugbu a-iwe onye.
Gịnị mere ị ga-etinye gị na ekwentị ala n'oge a ụbọchị, na otú ime otú gị Ohere nke ga-eme n'ọdịnihu ihe ịga nke ọma? Were a anya isii mere dọpụrụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ a mmekọrịta ender na ihe ị pụrụ ime iji gbanwee gị tech-jupụtara ịhụnanya ndụ.
Ị na-eme ya na-eche ka ọ bụ kpam kpam mkpa. Ọ bụrụ na e nwere ihe a juru mberede dị ka onye ezinụlọ e ẹka ọgwụ ma ọ bụ gị mere na-egwu ọkụ gị ma ọ bụrụ na unu adịghị laghachi ya ozi ịntanetị, e nwere obere ihe ka ibugharịa gị ntị gị ụbọchị na ekwentị gị. Kama akasiakde na ihuenyo kama gị ụbọchị ihu maka dum mgbede, ekwentị gị pụọ na-enye ya gị zuru anya.
Ọ nwere ike iche na ị dị nnọọ adịghị n'ime ya. Were ya na ị na na na na a ụbọchị onye na-n'ezie na ị ga-kama mgbe ịgwa ọzọ. Kedu ihe ị ga-eme? Ọ bụrụ na azịza gị dara ebe nso "akwụ ụgwọ ya ntị" Atiya - nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ị na-eme mgbe ị na-a dọpụ uche ụbọchị. Ọ bụ ezie na ị na-n'ezie texting gị mma nwa osisi na gị na ụbọchị bụ uber-ịtụnanya, o nwere ike na-omume gị dị ka ihe na-egosi na i nwere efu mmasị ya.
Ị anya ọjọọ. Gịnị ga-gị na nne gị na-ekwu banyere gị dara ogbenye àgwà? Biko, ruwe na ị na a ezinụlọ nri abalị, na-eche banyere kwesịrị ekwesị table iwu oru. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị kpọmkwem Miss Manners 100 percent nke oge, nke a bụ otu ihe aga-eme na i kwesịrị eso.
Mkparịta ụka bụ a abụọ-ụzọ ámá. The mbụ ole na ole ụbọchị inye a oge mgbe ị na gị nwere ọhụrụ onye na-dị nnọọ na-amata onye ọ bụla ọzọ. Mgbe niile Naanị gị cell, anabatakwa ozi ịntanetị ma ọ bụ texting ndị enyi gị na-ewepụta elu isi-eche nche mgbe ọ na-abịa na ndụ mkparịta ụka na a ga-eme n'ihu gị. Jụọ onwe gị ma ọ bụrụ na-agwa gị BFF na gị na ụbọchị bụ "otú mara mma" n'ihi na ọ na-emeso ya beagle dị ka ọ bụ nwa ya dị mma karịa n'ezie na-ekwu okwu ya banyere ịhụnanya ya maka ya Pita.
Ị na-eme a abụghị-na-mma mbụ echiche. The mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọdọ mmiri esịmde anya na mbara, na e nwere ihe mgbe niile ọzọ azụ na-gị ebe. Ime a ogbenye echiche na mbụ ụbọchị yiri agba gị nwere onye echiche onye ị bụ ma ọ bụrụ na ọ ga-apụ na gị ọzọ. Ọ na-aga ikwu, "ee," ka a abụọ ụbọchị mgbe ekiri ị na-emefu 30 nke gị 45 nkeji nri abalị ide ozi n'ekwe ntị? Ọ bụ yighị.
Njikọ na-mere site ndị, ma ọ bụghị na nkà na ụzụ. Ezie na ị pụrụ zutere online na mbụ "na-ekwu" site ederede, na-eme ka a ezi ịhụnanya njikọ gị mkpa n'ezie ụmụ mmadụ na-ụmụ mmadụ na mmekọrịta. Chịịrị ekwentị gị na-enye gị ụbọchị free ọchịchị ime otu ihe ahụ. Ịgwa ndị ọzọ n'oge gị ụbọchị uche gị na-eme ka a na njikọ na onye ọ bụla ọzọ.
Olee otú A Nwoke Job nwere ike ekpughe Ya ihunanya Ụdị Mmadụ